Ciidamada Uganda ee jooga Soomaaliya oo Mushaar la’aan ka cabanaya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ciidamada Uganda ee jooga Soomaaliya oo Mushaar la’aan ka cabanaya.
On May 6, 2019 236 0
Ciidamada Uganda ee magacooda loo soo gaabiyo UPDF, waxay qeyb ka yihiin shisheeyaha duulaanka ku jooga wadankeena Soomaaliya, ee geysanaya gabood fallada xanuunka badan, waxaana Uganda lagu tiryaa dowladii ugu horeysay ee ciidameedu soo gaaraan dalkan sanadkii 2007-da, kadib duulaankii Xabashida.
Ciidamada Uganda, waxay hadda ka cabanayaan mushaar la’aan baahsan, iyagoo sheegaya in dhowr bilood aysan helin wax lacago ah, taas oo ay ka muujiyeen wal wal xoogan.
Askartan oo la hadlay tvga wadanka Uganda ayaa shaaca ka qaaday in todob bilood oo ay joogaan dalka Soomaliya aan la siin wax mushaaraad ah, iyagoona intaa ku daray in dhowr bilood kadib loo soo taagay lacag dhan boqol dollar, taas oo aad uga yar lacagta ay sugayeen.
Ciidamadan oo qaarkood codkooda la qarinayay sababo ku aadan amnigooda ayaa shaaca ka qaaday in mushaar la’aantu ay soo food saartay tan iyo sanadkii 2017-ka, xilligaas iyo illaa sanadkan waxay sheegeen in mushaaradkooda ay yihiin kuwa aan si joogta ah loo bixinin.
Mid kamid ah askarta oo sii hadlaya ayaa sheegay in askariga Ugandheska ah ee jooga Soomaaliya haddii uu codsado lacgtiisa mushaarka ah uu la kulmayo culeesyo kala duwan oo ay kamid tahay in la hakiyo howshii uu ka waday Soomaaliya, dibna loogu celiyo wadankiisa.
Richard Kerimire oo ah afhayeenka ciidamada milliteriga Uganda oo ka hadlay cabashada ciidamadan ayaa shaaca ka qaaday in sababta ugu weyn ee keentey in askartu ay heli waayeen lacagaha ay lahaayeen ay tahay dhibaato dhaqaale oo heysta golaha Amaanka oo bixiya qarashka ku baxaya ciidamada kusoo duulay Soomaaliya.
Masuuliyiinta milliteriga Uganda ayaa lagu eedayaa iney musuq maasuqaan lacagaha ciidamada, iyagoo bilo xiriir ah aan wax lacagaha siinin ciidamada, iyadoo dhanka kale ay jirto dhaqaale xumi heysata dowladaha maalgeliya Shisheeyaha.
Marar badan madaxda Uganda waxay weerar afka ah ku qaadeen dowladaha bixiya dhaqaalaha duulaanka Soomaaliya, iyagoo ku eedayay iney soo daahiyaan bixinta lacagaha, mararka qaarna ay keenaan iyadoo qabyo ah.
Si lamid ah sida ay ciidamada Shisheeyaha uga cabanayaan in la doodsiiyo lacagaha mushaaraadka ah ee ay leeyihiin, ayay ciidamada dowladda federaalka waxay ka cabanayaan mushaar la’aan adag oo soo wajahday.
Arintn awgeed, ayaa ciidamo katirsan dowladda waxay baneeyeen deegaanno ay ka joogaan gobollada Shabeellooyinka, waxaana madaxda dowladda oo uu kamid yahay ra’isiul wasaare Xasan cali KHeyre ay ku andacoodeen iney bixiyeen guud ahaan mushaaraadka ciidamada dowlada.
Shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa ah dad u halgama hungiga, mana ahan ciidamo leh caqiido ku hogaamineysa iney ku sabraan dagaalka ka holcaya Soomaliya ee ay kula jiraan Xarakat Ashabaabil Mujaahidiin, sida uu horey u sheegay madaxweynaha dowladda Maxamad Farmaajo. Waana mida keenysa in mar weliba qeyla dhaanta ciidamada laga maqlo warbaahinta noocyadeeda kala duwan.
Axmad 3746 posts 8 comments
Weerar Dhabba-gal ah Iyo Kuwa Toos ah oo ka Dhacay Qeybo Kamid ah Goballada Dalka.
Madaxweynihii hore ee Aljeeriya Butafaliqa Oo Geeriyooday.
Axmad	 Sep 18, 2021 0
Xalay ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax iyo kamiin la beegsaday askar kirsan Maamulka…